Maatiinkoo nama Keenyaa ta'e arganii hin beekan: Dubartii Chaayinaa Keeniyaatti jireenya haaraa tolfatte - BBC News Afaan Oromoo
Shuu Jiingiifi Henerii Rootiich waggaa kudhan dura jaalala eegalan
"Walii walii keenyarraa jaalalli nu qabe, garuu yeroo jalqabaa baayyee rakkisaa ture," jechuun ibsiti Shuu Jiingi balbala Hoteela Feermonti Naayiroobii keessatti argamu dura teessee.
"Maatiinkoo waa'ee Afirikaa tasuma hin beekan ture. Kanaan dura nama Keenyaa ta'e tokkoyyu arganii waan hin beekneef baayyee yaadda'anii turan."
Henerii Rootiich - namni Keenyaa gaaffii keessa gale sunis baayyee yaadda'ee ture.
Namoonni kun lamaan kan wal jaallachuu eegalan erga Heneriin hojii mootummaatiif jedhamee akka afaan Mandariin baratuuf Chaayinaatti ergameedha.
Ogummaa afaan sirriitti danda'ee abbaa Jiingi waliin laaqana baayyee hawwataa ta'erratti, akka eebbisaniif gaafachuuf, torbeewwan baayyee isa fudhate.
"Abbaan ishee waan baayyee hin jenne ture. Kanaaf, ani waa'ee maalii yaadaa jira jedheen dhiphadhe. Nyaata sana jaallates jaallachuu dhiises nuti dhiyeessineerraaf," jechuun kan ture yaadata Heneriin.
Yeroo booda garuu dandeetiin afaan Mandariin inni qabu cimee: waggoota kudhanii booda dhirsaafi niitiin kun ar'a magaalaa guddittii Keenyaa, Naayiroobii keessa waliin jiraatu. Ijooollee lama horachuunis maatii sabboontota ta'uu agarsiisaniiru.
Jiingiin yeroo ammaa Dhaabbata Konfiishes jedhama Yuunvarsiitii Naayiroobii keessatti argamu keessatti Mandariinii barsiifti. Isheen lammileen Chaayinaa 10,000 gara biyya Baha Afirkaatti argamtu kanaatti dhufan keessaa tokkodha.
Maatiin isaanii kun hariiroon Chaayinaafi Keenyaa gidduu jiru akka guddachaa jiru agarsiiftuu gaariidha. Hariiroon kunis irra caalaa invastimentii Chaayinaan biyyattii keessatti gochaa jiruun si'oomina argachaa jira.
Bifni jijjiirama kanaa kuutummaa Ardittiitti kan mullatudha. Duubatti debinee bara 2000 keessa daldalli Chaayinaafi Afirkaa gidduu jiru $10bn (£7bn) gaha ture. Amma hanga bara sana ture gara $300bn akka ol guddate amanama.
Seenaan Jiingiifi Henerii kan milkii qabudha, garuu hariiroon isaan lamaan gidduu ture akkasumaan kan gufuu tokko hin qabne hin turre.
Chaayinaan biliyoonotaan pirojektoota bu'uuraaleen irratti baasii gochuun hojjetaniiru
Daandii Tikaarratti, daandii guddaa magaalaa Naayiroobiifi bakka Zoonii Industirii Tikaa walqunnamsiisu hamiin "daa'imman Tikaa" kan jedhu naannootti beekamaadha.
Akka hamii dubbatamu kanatti, hojjetoonni ijaarsaa Chaayinaa, ijoollee dhibbaan lakkaa'aman dubartoota naannoo sanaarraa dhalchanii turan.
Akka dhaabbileen midiyaa gabaasanitti durbee osoo mana barumsaa jirtuu hojjetoota Chaayinaa kanaaf ulfoofte, hojjetoota kana keessaa eenyuuf akka ulfooftellee ilaaltee adda baasuu dadhabde jedhama.
Dubbi akkas ho'ee haasa'amu kanaaf sirbillee akka ba'e dubbatu. Lammileen Keenyaa garuu ragaa ijoollee kanaa kan argan hin qaban.
Kun ta'us garuu hamii jiru dhaabuu hin dandeenye.
"Ani ijoollee gara 20 ta'an argeera. Kun waan gadi qabanii asaassanidha malee mullisanii hin dubbatan, sababiin isaas, Chaayinoonni abbaa jedhaman kun waan naannootti hin argamneef," jechuun ibsa Zacher namni jedhamu naannoo Daandii Tikaa jiraatuufi afaan Chaayinaafi Keenyaa jijjiiruun hojjetu akka nutti himetti.
"Akkan yaadutti, waggoota 15 ykn 20 booda yeroo ijoolleen kun kollejjii galan, waanti akka hamiitti odeeffau kun sadarkaa maaliirra akka jiru baruun ni danda'ama."
'Saatiin Afrikaa jijjiiramaa jira'
Chaayinaanni abbaa ta'an dhibamuun ykn gara biyya isaaniitti deemuun qe'ee CHaayinaa-Keenyaatti amma rakkoo ta'uu dhiisuu mala.
Jiingiif - kan yeroo imaammanni Chaayinaa 'Daa'ima tokko' jedhutti guddatteef - eebba miseensota maatii nama gammachiisudha.
Miseensonni seera baastuu Hongi Koongi Chaayinaa yeroo daawwatanitti daldala ilkaan arbaa dhaabsisuuf gargaaruu akka fedhan ibsan
"Nuti maatii bal'aafi warra walii walii isaanii wajjin dabarsuudhaaf dhufan baayyee qabna," jedha Heneriin. Ijoollee adaadaa ykn eessummanii nu waliin dhufanii yeroo dheeraa nu waliin dabarsan heddu qabna.
"Chaayinaa keessatti waana akkasii hin qaban. Maatiin walii walii isaanii daawwachuu ni danda'u garuu yeroo gabaabaadhaaf qofadha."
Garaa garummaan aadaa biroonis ni jiru, kan akka ilaalcha waa'ee yeroo irratti qabnurratti.
Chaayinaafi Keenyaa: Lakkoofsaan
Keenyaa: 580,000 km² (maayilii 224,000 sq ) bal'atti
Chaayinaan: 9,597,000 km² ( maayilii 3,700,000 sq ) bal'atti
Dinagdee (GDP) tokkoo tokkoo namaatti:
Maddae: Fuula Feesbuukii Baankii Addunyaa
"Chaayinoon asi ni dhufuu, kaayyoo tokko sammuutti qabu. Saatii dheeraadhaaf hojjetu - boqonnaa yeroo gabaabduu qofa fudhatu, pirojektiin jalqaban amma danda'ametti akka xumuramuufis dhum-torbeerra dabalee ni hojjetu."
Kun waan Jiingiifi Heneriin hubatanidha.
"Sirriidha, kun dhugaadha. Keenyaanonni dhimma kanarratti baayyee dhimma hin qaban garuu amma jijjiiramaa jira … yaadni saatii Afirkaa jedhamu kun amma jijjiiramaa jira. Saffisni misoomaa sirriitti dabalaa jira - kanaaf, saatii keenya keessatti waan hedduu hojjennu qabna."
Heneriin ofuma isaafillee yerootti fayyadamuu akka barate dubbata.
Amma Chaayinoonn baayyeen gara Keenyaa dhufaa jiru, garaa garummaa aadaa jirus amma dhiphisuuf hojiin bal'aan hojjetamaa jira.
Dhaabbanni Konfishes - bakka Jiingiin hojjechaa jirtu - sagantaa deegersa mootummaa Chaayinaatiin hariiroo Chaayinaafi Keenyaa gidduu jiru qajeelchuudhaaf hojjeta.
Keenyaanota bakka kanatti barataniif, kubbaaniyoota CHaayinaa keessatti miindaa gaariidhaan akka qacaramanii hojjetan abdii guddaadha. Warra Chaayinaaf ammoo, akka biyyi isaanii hidhannoo cimaa Keenyaa waliin qabaattu agarsiisa.
Uhuruu Keeniyataafi Shii Jiin Piingi hariiraa isaanii cimsachuu fedhu
Jiingi Keenyaa akka egeree isheetti ilaalti.
"Chaayinaa irraa fagaachuun natti dhaga'amus garuu mannikoo amma Keenyaadha," jetti. "Chaayinoonni biyya kana dhufan baayyee jaallatu," jechuun yaadashee xumurte Jiingis.
Qunceen gosti mukaa Chaayinaa attamiin qarshii waraqaaf daandii akka itti bane
Phaaphaas Firaansis sodaa Kovid fi nageenyaa gidduutti Iraaq galan
Namichi intalasaa morma kutee ajjeese to'atame
'Walqaayitiifi Raayyaa humnaan nurraa fudhatamee ture humnaan deebifanne'
Abbaan seeraa nama shamarree gudeede akka fuudhuuf gaafachuun mormii jabduu kaase
UN loltoota lammiilee Tigraay ajjeesan irratti qorannoo hatattamaan eegaluu qaba - HRW
Yeroo dhuma kan haaromfame: 28 Guraandhala 2019